Zaza vao teraka, nariana teny amin’ny fitoeram-pako
Fanomanana ny ririnina Hanangona fanampiana ho an’ireo sahirana ny fikambanana SOS Zazagasy
Ho fiatrehana ny ririnina dia mikarakara hetsika fanangonana fanomezana ho an’ireo ankizy sahirana eto an-drenivohitra ny fikambanana SOS Zazagasy. Fikambanana iray miahy ireo ankizy tsy manan-kialofana moa ity fikambanana ity.
Foodwise : Manangona ireo sakafo tsy lany eto amintsika, mba ho an’ireo ankizy sahirana sy kamboty
Niova anarana ary nivadika ho Foodwise, ilay tetikasa « Manzer Partazer » izay miompana amin’ny fanangonana ireo sakafo tsy lany eny amin’ny tsena lehibe sy ny hotely, ary zaraina amin’ny ankizy sahirana.
Fanojo, very : Hita teny Mahitsy, salama tsara
Zaza very, nanaovana antso avo tato anatin’ny tambajotra Facebook ny talata alina teo, i Fanojo, ankizilahikely vao hanala BEPC amin’ity taona ity.
Ady amin’ny tsifanjariantsakafo Olona miisa 174.400 isa no hahazo tombontsoa amin’ny tetikasa HIAKE
Ny 8,5%-n’ny zaza latsaky ny 5 taona no tratran’ny tsifanjariantsakafo mahery vaika any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana, araka ny antontan’isan’ny biraom-paritry ny fanjariantsakafo any an-toerana, tamin’ny taona 2017.
Naolany nandritra ny 20 taona ny zana-badiny, niterahany zaza 10
Efa hatramin’ny faha-14 taonany ity zazavavikely iray tao Argentine ity no naolan’ny dadakeliny.
Hasarotam-piaro : notifirin’ilay mpitandro ny filaminana ny vadiny
Mpivady niady noho ny hasarota-piaro no tsy nahafehy tena, ka saika nifamono ho faty, tao Montréal Kanada ny sabotsy lasa teo.
Hain-trano : ankizy 4 niara-namoy ny ainy tamin’ny rainy
Olona 5 no indray namoy ny ainy tao Mulhouse, Haut-Rhin Frantsa vokatry fahamaizana nahazo ny trano fonenan’izy ireo.
Zaza vao teraka efa tsy misy aina intsony no nisy nahita, teny amina toby fanariam-pako iray tao Saint-Pol-sur-Mer, faritra avaratr’i Frantsa, ny sabotsy lasa teo.
Tovolahikely iray 13 taona, saika handeha hanatitra fako, no nahatsikaritra ity zazamenavava ity nifono lamba tao. Niantso ireo olona manodidina avy hatrany izy ary mandrapiandry ny mpamonjy dia niezaka nijery ihany sao mbola azo navotana ilay zaza, saingy efa tsy nisy aina intsony. Hatramin’izao dia mbola tsy fantatra mazava izay mety ho nahatonga ity zaza ity teo amin’io toerana io, na koa izay olona mety ho nivezivezy teo. Efa mandeha kosa anefa ny fanadihadiana lalina ary amin’ny alalan’ny fitiliana an’ilay razana no azo hitrandrahana ny zava-nisy.
Tsy vaovao amintsika aty Madagasikara koa ny tranga tahaka izany. Vao tamin’ny fiandohan’ity volana desambra ity izao no nahitana fatin-jazarano teny amin’ny tetezan’i Bekiraro. Tsy fantatra ihany koa izay nanao izany, fa raha ny tombantombana dia heverina fa nesorina tao an-kibo ilay zaza izay vao nariana teny an-toerana. Ho antsika aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana dia saika mipetrapetraka ho azy ny raharaha, rehefa vita ny fikarakarana ny razana, toy ireny fa tsy dia betsaka loatra ny tranga ahitana tohiny.
Mila mandray andraikitra
Amin’ny ankapobeny dia avy amin’ny vohoka tsy nirina avokoa no mitarika ireny fatin-jaza hita tetsy sy teroa, na zaza velona nisy nanary ireny. Rehefa sahiran-tsaina mikasika izay ho tohin’ny fiainany ilay reny mitondra vohoka, na tsy ampy fanohanana amin’ny manodidina azy dia mety hamoy fo tampoka, eny fa na dia efa ho tapitra izao aza ny vohoka ka madiva ho teraka ilay zaza. Manoloana izany dia aleo misoroka ny vohoka tsy nirina mba tsy hiafara amin’ny fanariana anaka na ny famonoana anaka tsy fidiny toy izany. Andraikitry ny ray aman-dreny manan-janaka vavy koa anefa ny manohana ny zanany mitondra vohoka tsy satry. Adidin’ny lehilahy ny mandray ny andraikiny amin’ny maha-ray azy, fa tsy hiandry hoterena vao hanao izany. Ankoatra ireo dia efa marobe ireo ivon-toerana sy akany no mandray ny reny sahirana mitondra vohoka, na zaza vao teraka tsy manam-piahy, raha sendra tsy maintsy hisaraka amin’ny menaky ny aina.